Golaha ammaanka oo taageero u balanqaaday dowladda Soomaaliya. – Radio Daljir
Febraayo 20, 2017 10:11 g 0
New York, Feb 21 2017-Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa waxaa ay sheegeen in ay kordhin doonaan dagaalka lagu jiro Al-Shabaab ,islamarkaana ay dadaallo dheeri ay ku bixin doonaan sidii loo adkeyn lahaa Ammaanka iyo Xasiloonida Soomaaliya.
War qoraal ah oo kasoo baxay golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in ay dadaal dheer ay ku bixin doonaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya.
Dhanka kalena xubnaha golaha ammaanka ayaa waxa ay tilmaameen in Awooda Al-Shabaab ay daciiftay, islamarkaana loo baahan yahay in la tayeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
” Dalalka xubnaha ka ah golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey waxaa ka go’an in ay taageero lixaad ah ay siiyaan Soomaaliya si looga guuleysto Al-Shabaab , islamarkaana looga hortago Weerarada iyo Qaraxyada ay geysanayaan” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.
Ugu dambeyntii Warka kasoo baxay golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ay si weyn loogu cambaareeyay Qaraxii ka dhacay Xaafadda Kaawo-Godey ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
DHEGEYSO-Cabasho ka soo yeeraysa kalluumaysata xeebaha Puntland.